Resin Adsorption nke Marcrooporous
Resins Nhazi matriks nke Polymer Ọdịdị Ụdị Ahụ Elu nMpaghara m2/g Nkezi Pore Dayameta Adsorption ikike Ọdịnaya Mmiri Akụkụ urughuru mm Mbupu ibu g/l
AB-8 Macroporous Ploy-styrene nwere DVB Opaque White Spherical chaplet 450-550 103 nm 60-70% 0.3-1.2 650-700
D101 Poly-Styrene macroporous nwere DVB Opaque White Spherical chaplet Afọ 600-700 10 nm 53-63% 0.3-1.2 670-690
D152 Macroporous Pype Poly-acrylic nwere DVB Opaque White Spherical chaplet Na/H 1.4 meq.ml 60-70% 0.3-1.2 680-700
H103 Bipute Crosslink styrene na DVB Agba aja aja gbara ọchịchịrị gbara gburugburu 1000-1100 0.5-1.0TOC/g100 mg/ml 50-60% 0.3-1.2 670-690
Resin adsorption nke macroporous bụ ụdị resin mgbasa ozi polymer na -enweghị otu mgbanwe na usoro macroporous. Ọ nwere ọmarịcha netwọkụ macroporous yana mpaghara elu akọwapụtara nke ọma. Ọ nwere ike na -ahọpụta adsorb okwu elektrọnik na mmiri mmiri site na mgbasa ozi anụ ahụ. Ọ bụ ụdị adsorbent polymer organic ọhụrụ mepụtara na 1960. E jirila ya mee ihe na nchekwa gburugburu, nri, ọgwụ na mpaghara ndị ọzọ.
Resin adsorption nke macroporous bụ ihe na-acha ọcha na-acha ọcha nwere nha nke 20-60 mesh. A na -ekekọta macrospheres nke resin adsorption resin macroporous nke ọtụtụ oghere nwere oghere n'ime ibe ha.
Ejiri polymerized resin mgbasa ozi macroporous na styrene, divinylbenzene, wdg na ngwọta gelatin 0,5% na oke nke porogen. Ejiri Styrene dị ka monomer, divinylbenzene dị ka onye nnọchi anya njikọta, toluene na xylene dị ka porogens. Ejikọtara ha na polymerized ka ha wee nwee ike mepụta usoro nwere oghere nke resin mgbasa ozi macroporous.
Nhọrọ nke mgbasa ozi na ọnọdụ ịtọhapụ na -emetụta ịdị mma nke usoro mgbasa ozi nke resin adsorption macroporous, yabụ ekwesịrị ịtụle ihe dị iche iche na usoro ahụ niile iji chọpụta ọnọdụ mgbasa ozi kacha mma na ọnọdụ ịtọhapụ ya. Enwere ọtụtụ ihe na -emetụta mgbasa ozi resin, dị ka njirimara nke ihe ndị kewapụrụ iche (polarity na nha molekul), njirimara nke na -ebubata ihe mgbaze (mgbaze nke ihe mgbaze na ngwakọta, itinye nnu na uru pH), mkpokọta nke ntinye mbupu na mmụba mmiri mgbasa. ọnụego.
Na mkpokọta, enwere ike ikewapụta irighiri ihe polar buru ibu na resin polar na-ajụ, a ga-ekewakwa obere irighiri ihe pola na resin na-abụghị polar; Nnukwu olu nke ogige ahụ, ọ ga -ebuwanye ibu pore nke resin; Enwere ike ịbawanye ikike mgbasa ozi resin site na ịgbakwunye nnu inorganic kwesịrị ekwesị n'ime ngwọta mbugo; Ogige acid dị mfe ka a na -etinye ya na mmiri acid, ihe ndị bụ isi dị mfe ka etinyere ya na mmiri alkaline, yana ogige ndị na -anọpụ iche na -adị mfe ịmegharị na ngwọta na -anọpụ iche; N'ozuzu, ala ịta nke ngwọta loading, mma adsorption; Maka nhọrọ nke idobe ọnụego, ọ ka mma ijide n'aka na resin nwere ike ịkpọtụrụ n'ụzọ zuru oke na ntinye mbubata maka mgbasa ozi. Ihe ndị na -emetụta ọnọdụ ịtọgbọrọ n'efu gụnyere ụdị elu, itinye uche, uru pH, ọnụego na -asọba, wdg. Ihe dị elu nwere ike ịbụ methanol, ethanol, acetone, ethyl acetate, wdg. ikike nke ihe dị iche iche na resin; Site n'ịgbanwe uru pH nke elu, enwere ike gbanwee ụdị molekul nke adsorbent, ọ dịkwa mfe ịkasị; A na-ejikwa ọnụego ngagharị elution na 0.5-5ml/min.
Ogo pore na mpaghara elu ala nke resin mgbasa ozi macroporous buru ibu. Ọ nwere akụkụ pore atọ nwere akụkụ atọ n'ime resin, nke nwere ọtụtụ uru dị ka nkwụsi ike anụ ahụ na kemịkal, nnukwu mpaghara akọwapụtara nke ọma, ikike mgbasa ozi buru ibu, nhọrọ dị mma, ngwa ngwa mgbasa ozi ngwa ngwa, ọnọdụ ịtọgbọrọ n'efu, mmụba dị mma, ogologo oge okirikiri ọrụ, dabara maka okirikiri sekit mechiri emechi yana ịchekwa ego.
Nke gara aga: Mkpụrụ ndụ Inert na Polymer
Osote: MA-202U (Resin Exchange Resion Anion siri ike)